Maxay hey’adda culumada Soomaaliyeed ka tiri sharcigii shalay laga hor akhriyey golaha shacabka? | warsanradio baydhabo
Madaxweynihii Hore Ee Dalka Zambia Oo La Dhigay...
Madaxweynaha Zambia Edgar Lungu oo istaagga ka dhacay
Dab khasaaro geystay oo ka kacay Suuqa weyn...
Dhageyso:-ku celiska Barnaamijka oo looga hadlaayo Barshada nafaqada...
Ra’iisul Wasaare Rooble oo la kulmay Safiirka Maraykanka...
Baarlamaanka Israel oo soo afjaray xukunkii Netanyahu ee...
Home WARARKA MAANTA	Maxay hey’adda culumada Soomaaliyeed ka tiri sharcigii shalay laga hor akhriyey golaha shacabka?
Mas’uuliyiinta hey’adda culimada Soomaaliyeed oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa taageero u muujiyey go’aankii ay guddoonka golaha shacabka ka qaateen sharcigii muranka badan dhaliyay ee Jinsiga, kaas oo qodobo ka ka mid ah guddoomiye Maxamed Mursal uu shalay ka hor akhriyey kulankii xildhibaannada Golaha Shacabka.
Culimada Soomaaliyeed ayaa iyaguna ku caddeeyay shirkoodii jaraa’id ee maanta ka dhacay Muqdisho, mowqifkooda ku aadan sharcigan oo ay soo gudbisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal oo aad u carteysan ayaa shalay qodobka afaraad ee sharcigaas ka hor akhriyey golaha shacabka, kaas oo ay ku jireen qodobo ka hor imaanaya diinta islaamka iyo dhaqanka suuban, isagoo xusay in marar badan golaha lagu soo cel-celiyay si looga ansixiyo.
Sidoo kale culimada Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka hadleen, falalka kufsiga ah ee mudooyinkan dambe ku soo badanayay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka.
Culamada ayaa dowladda Soomaaliya ka dalbaday in cid kasta oo falalkaasi geysata laga qaado tallaabo sharciga waafaqsan,
Sheekh Bashiir Axmed Salaad, Sheekh Nuur Baaruud Gurxan iyo Sheekh Cali Wajiis ayaa u hadlay culumadii maanta shirka jaraa’id ku qabatay magaalada Muqdisho.
Maxay hey’adda culumada Soomaaliyeed ka tiri sharcigii shalay laga hor akhriyey golaha shacabka? was last modified: September 15th, 2020 by Admin
Madasha Xisbiyada oo Farmaajo ku eedeysay kali-talisnimo iyo ku tumasho dastuur
Maamulka Puntland oo War xasaasi ah kasoo saartay xaalada dalka iyo doorashooyinka
Kenya oo soo bandhigtay Tirada dadka ku dhintay Weeraradii Alshabaab ee 2019
DHAGEYSO:WARKA HABEEN IDAACADA WARSANRADIO 31-10-2016
Dhageyso: Saraakiisha Caafimaadka Degmada Ceelberde Oo Dalbaday In Laga Caawiyo Dawooyin Iyo Qalabka Caafimaadka.
Video Waxaa Manata Magalada Baydhabo Dib Ugu Soo Laabtey Xildhibaanadii Mooshinka
Xukuumadda oo qalab dadka looga baaro COVID-19 iyo Dawooyin gaarsiiyay Baraawe
Banaanbaxyo rabshado wata oo weli ka sii socda wadanka Mareykanka